Breaking News: Xisbiga Kulmiye Oo Doortay Murashaxiinta Madaxwene Iyo Madaxweyne Ku Xigeen Ee Uga Qeybgeli Doona Doorashoyinka | Somaliland.Org
August 26, 2008	Burco (Somaliland.Org) Shirkii golaha dhexe ee xisbiga Kulmiye ayaa mar dhoweyd (Salaasa) doortay murashaxiintii xisbigaas uga qayb geli lahaa doorashooyinka Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku Xigeenka ee lagu wado inay dhacaan sanadka soo socda bishiisa sadexaad.
Waxa murashaxa madaxweynaha ku guulaystay guddoomiyaha xisbiga horena u ahaa murashaxii madaxweynaha ee xisbiga doorashadii hore, Mujahid Axmed M Maxamud Silanyo. Dhinaca kale waxa jagada murashaxa madaxweyne kuxigeenka ku guulaystay Mudane Cabdiraxmaan Saylici oo ahaa guddomiye xigeenkafraad ee xisbiga Kulmiye.
Maalmahii ugu danbeeyey ayaa waxa jagada murashaxa madaxweyne ku xigeenka ka jiray loolan aad u adag oo afar murashax oo ku barataya jagadaas u dhaxeeyey, taasoo dhalisay muran iyo khilaaf, sida wararku sheegayan.
Waxii war ah ee arrintan kusoo kordha kala soco Somaliland.Org.